Finoana arahina… asa | NewsMada
Finoana arahina… asa
Nandao antsika ny maraina teo ny Papa Fransoa. Niverina, namonjy an’i Vatikana, fa tsy hoe inona akory. Manampy isa ny tantaran’ny firenentsika, indrindra eo amin’ny lafiny finoana, iny fivahiniana lehibe nataony teto amintsika iny. Izy no lasa fa ireo hafatra sy teny nomeny mitoetra. Samy niventy izany hafatra izany avokoa, nandritra izay andro vitsivitsy izay ny rehetra : “Fiadanana”, “Fandriampahalemana”, “Fanantenana”. Araka ireny efa norenesina ireny, mpitondra, mpamafy ihany no anjarany, miampy ny lehibe indrindra, dia vavaka ho an’ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy rehetra.
Mitaky asa izany fa tsy ventesina sy hirahiraina, na tenintenenina fotsiny ihany. Isika rehetra isambatan’olona, manombola amin’ny lehibe indrindra, hatramin’ny ankizy madinika mahatsiaro saina, ny tompon’andraikitra rehetra tsy ankanavaka, na ara-panjakana na ara-pinoana… Samy tompon’andraikitra avokoa.
Amin’ny sehatra maro, manomboka ao an-tokantrano, mivoaka eo amin’ny fiarahamonina, mipaka amin’ny firenena manontolo no azo ampiharana izany. Fahaiza-miaina, fifanajana, fandalàna ny rariny sy ny hitsiny, fitiavana ny hafa,… Izany no ahazoana fiadanana. Ny tsy fanaovana kely tsy mba mamindro, ny fitiavan-kely, fanilikilihana, fankahalana… Mbola anisany koa izany.
Ary ny kolikoly sy ny halatra miteraka fahalovana ? Ny herisetra sy ny fampiasan-kery amin’ny marefo sy malemy ? Mitondra fanantenana, mitarika fiadanana, ahatongavana amin’ny fandriampahalemana izany.
Mampahery sy mamafy ary miovavaka ihany no anjaran’ny Papa. Isika rehetra no miasa, miara-miasa hahatanteraka ny zavatra rehetra. Mikolokolo ny fihavanana, toy ny manondraka rano ny fambolena sy ny zaridaina. Manala ny ahi-dratsy, mihava ny tany… Ny manantena, tsy hoe mipetraka na miandry fotsiny, manao “ariary zato am-pandriana”, hoy ny fitenenana. Mila asa izany. Ny finoana tsy arahina asa rahateo, hoy ny Soratra Masina, dia maty.